Andro: 4 mey 2020
5,5 miliara EURO voaangona ho an'ny vaksiny Corona Virus!
Ny World Vaccine Alliance, izay napetraka hanohanana ny fampandrosoana ny vaksiny amin'ny otrikaretina corona dia nanomboka ny federasiona fanangonam-bola virtoaly. Ho fanampin'ny Vondrona Eropeana (EU), ireo firenena toa ny UK, Norvezy, Canada, Japon ary Arabia Saodita [More ...]
Minitra farany: Nosokafana ny mpanety volo sy ny salons tsara tarehy tamin'ny 11 mey
Ny filoha Recep Tayyip Erdogan dia nanambara ny drafitry ny fanavaozana azy taorian'ny fivoriana Kabinetran'ny filoha. Raha ny filazalazana mivantana dia mitohy mandritra ny 11 mey ny orinasa toy ny barbika, taovolo volo ary salons tsara tarehy. Antsipirihany tamin'ny minisiteran'ny atitany [More ...]
Ny fahafahana voalohany mandritra ny 65 taona mahery
Araka ny fampitam-baovao mivantana nataon'ny filoha Erdogan taorian'ny fivorian'ny kabinetra, ny fetra faran'ny curfew ho an'ny vondrona dia mihoatra ny 65 no nampiakatra voalohany. Ny olom-pirenentsika mihoatra ny 65 dia voafetra amin'ny andro vitsivitsy amin'ny herinandro [More ...]
Rava ny curfews amin'ny tanàna 7
Raha ny fanambarana nataon’ny fampielezana mivantana nataon’ny filoha Recep Tayyip Erdogan dia hitohy ny faran’ny herinandro teo ny fangatahana ny curfew. Na izany aza, tafarina amin'ny faritany 7 ny curfews ary azo atao ny mandeha amin'ireny faritany ireny. [More ...]
Fampiharana tokana roa nesorina tao Istanbul Ankara sy Izmir Taxis
Mikendry ny hitantana ny loza mety hitranga amin'ny areti-mifindra amin'ny coronavirus eo amin'ny lafiny fahasalamam-bahoaka sy ny filaminam-bahoaka, ny fiantohana ny fitokonana sosialy, ny fihazonana lavitra ny fiaraha-monina ary ny fanaraha-maso ny hafainganam-pandehan'ny fihanaky azy. [More ...]
Torohevitra Quarantine ho an'ny marary Coronavirus
Ny fitsapana Covid 19 anao dia nanaporofo fa tsara, saingy ny soritr'aretinao dia malefaka na tsapanao tsara. Ka inona no tokony hataonao amin'ity toe-javatra ity? Nilaza ny manam-pahaizana fa ny marary izay handany ny fizotran'ny valan-jaza ao an-trano [More ...]
Itu Rover Team, izay Unmanned Ground Vehicle Design Degree nitondra Torkia
Miaraka amin'ny fiara tsy voafehin'ny fiara dia niditra tamin'ny laharana faha-36 ny ekipa ITU Rover Team tamin'ny fifaninanana University Rover Challenge nokarakarain'ny Mars Society tany Etazonia. Manohy ny asany amin'ny robot de explorer planét [More ...]
Mitohy hatrany ny famatsiam-bola ao amin'ny Eskişehir OBS
Nadir Küpeli, Filohan'ny Birao Eskişehir OSB, dia nilaza fa manohy ny asany amin'ny maha-fitantanana izy ireo mba hahatonga ny famokarana indostrialy sy famatsiambola ho an'ny OIZ amin'ny tontolo milamina. Hoy ny filoha Küpeli, “Ho fampandrosoana sy fanambinana. [More ...]
Coronavirus no voakasiky ny mpanondrana indrindra
Torkia mpanondrana Assembly (TIM), araka ny angona navoakan'ny Aprily fanondranana 45 isan-jato ny fanondranana ny Eskişehir tamin'ny volana teo aloha, raha ny fitambarany tao efa-bolana voalohany dia nampiseho ny 12 isan-jato ny fihenan'ny. Eskişehir Voalamina [More ...]
Mifanakalo amin'ny tetezana Karakoyun sy Viaduct feno
Vitan'ny Transchange Bridge sy Karadoyun, izay hanamaivana ny fivezivezena ao Sanliurfa, no vita. Mayoranlıurfa Metropolitan'ny ben'ny tanàna Metropolitan Zeynel Abidin Beyazgül, tao anatin'ny faritry ny fandinihana dia nihitatra na dia teo aza ny fihanaky ny tsimokaretina corona [More ...]
Ny asa asphalt dia tsy nihena tamin'ny curfew tao Eskişehir
Eo am-panatanterahana ny drafitry ny hetsika Virona Corona amin'ny fahavononana, ny Eskişehir Metropolitan Munisipaly dia manohy ny asany mandritra ny famoahana ny filan'ny olom-pirenena amin'ny andro fitsidihana azy. Amin'izany toe-javatra izany, miaraka amin'ny ESTRAM [More ...]
Fandaharana vaovao ho an'ny Tarsus Çamlıyayla Yolu Hiditra any amin'ny faritra Konak
Mitohy ny fandaharana vaovao ho an'ny Mersin Metropolitan ao Tarsus izay azo antoka ny fifamoivoizana sy haingana. Mampifandray ny distrikan'i Tarsus sy Çamlıyayla, koa [More ...]
CommitteeBB Komity siantifika: 'Avelao hijanona ny dingana fanavaozana aorian'ny fety'
Ny Birao Mpanolo-tsaina siantifika IBB COVID-19 dia nihaona tamin'ny alahady 3 mey. Taorian'ny fihaonana dia mila fangatahana miverimberina tsy miovaova ho an'ny Istanbul mandrakotra ny Ramadany sy alohan'ny. [More ...]
Nanomboka ny fanentanana fandefasana fandefasana IMM! Ka Ahoana no Itokisana?
Ny filohan'ny İBB Ekrem İmamoğlu dia nampiditra ny fampiharana "fampiatoana ny fangatahana" ho an'ireo mpitsabo mpanampy izay sahirana mafy tamin'ny fizotry ny valan'aretina. Ny antsipiriany fampiharana http://www.ibb.gov.tr Statedmamoğlu dia nanambara fa mety ho tratran'ireto teny manaraka ireto: [More ...]
Fanaterana ny fanaraha-maso ny fiara mifamoaka finday voafetra amin'ny fiara
Rantsana manan-danja roa amin'ny indostrian'ny fiarovana Tiorka no nanatevin-daharana ny herin'ny fiarovam-piarovana finday miorim-borona, Ateş. Ny fanaraha-maso finday momba ny finday Armored, natomboka niaraka tamin'ny Katmerciler sy ASELSAN, ilay orinasa lehibe teknolojia fiarovana ao amin'ny firenentsika. [More ...]
Ny sidina ara-barotra voalohany dia nanomboka tamin'ny lalamby lalamby Samsun Sivas Kalın
Sivas-Samsun, Torkia voalohany vy lalamby tsipika nisokatra, iray amin'ireo lalana rehefa afaka tokony ho 5 taona asa manavao. TCDD izay nohidiana tamin'ny 12 jona 2015 ary natsangana ny fotodrafitrasa sy ny fenitry ny superstrukture. [More ...]
Rahoviana no hisokatra ny Subway Ümraniye Ataşehir Göztepe?
Ny filohan'ny İBB Ekrem İmamoğlu dia nandinika fandinihana an-toerana tao an-tanàna nandritra ny dia. İmamoğlu dia nanao fandinihana momba ny fananganana lalamby any Ataşehir, mpandoto loto ao Ümraniye ary zaridaina misy rihana maro ao insküdar. Nanomboka tamin'ny taona 2017 [More ...]
Niova ny laharam-pahamehana ho an'ny minisitry ny fitaterana ..! Tetikasa am-polony no nasandratra ..!
Ny solombavambahoakan'i CHP Niğde Ömer Fethi Gürer dia nitondra ireo tetik'asa izay napetraky ny minisiteran'ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa tamin'ny taon-dasa, saingy tsy ela akory izay no nitadiavana ny teti-dratsin'ny TBMM miaraka amina foto-kevitra. Namaly ny tolo-kevitr'i Gürer ny fitaterana [More ...]
Ilay iraka fizahan-tany sy fivarotana fizarana mankany amin'ny Cumhuriyet Street nostalgic Tram
Tamin'ny resadresaka nifanaovany tamin'i Bursa Hayrettin Eldemir, Filohan'ny birao fiarovana ny vakoka ara-kolotsaina ao Bursa, dia nanokatra pejy iray manokana izy ho an'ny trondro Cumhuriyet Street miaraka amin'ireo soso-kevitra izay hitondra fifandraisana amin'ny fitaterana ankoatry ny fahatakaran'ny fizahan-tany vaovao an'i Bursa. Söze… "Io tram io dia tsy nampiasaina hatrizay", nanomboka sy nanantitrantitra ny andraikitry ny fizahan-tany: [More ...]
Soso-kevitra hanamaivana ny fifamoivoizana sy ny fizahan-tany any Bursa miaraka amin'ny 3 Touch
Ny marina aloha dia i Bursa mazava ho azy fa tsy tanàna tiana hanaovana fialan-tsasatra amoron-dranomasina. Na izany aza, miaraka amin'ny tantara 8 taona ary izy no renivohitra voalohany tao Ottoman, dia tanàna iray tsy mitovy amin'ny fizahan-tany tena izy. Ny fizahantany farany ny fizahantany sy ny fizahantany ara-pahasalamana [More ...]
Manambara i DHMI ..! Any amin'ny seranam-piaramanidina Atatürk Jereo fa maninona no potika?
Ny Tale Jeneraly Vaomieram-pirenena momba ny seranam-piaramanidina (DHMİ) dia nanao fanambaràna mikasika ny lalana eny amin'ny seranam-piaramanidina Atatürk. Amin'io fanambarana io dia nisy fiantraikany ratsy tamin'ny làlan'ny seranam-piaramanidina Istanbul ary ny asa fanaovan-draharaha. [More ...]
'Fanohanana miatrika-fampindram-bola amin'ny fiainana an-trano kely avy amin'ny Halkbank
Tao anatin'ny sehatry ny ady amin'ny tsimokaretina Corona, izay nivadika ho areti-mifindra manerantany ary tsapa ao amin'ny firenentsika, ny varotra, ny varotra ary ny indostria. [More ...]
Nanambara ny sary ho an'ny fanondranana April ny tarehin'ny minisitra
Araka ny filazan'ny GTS, nihena 41,38% ny fanondranana tamin'ny volana aprily raha oharina tamin'ny volana tamin'io taona lasa io ary mahatratra 8 miliara 993 tapitrisa dolara. Noho ny valanaretina pesta, indrindra ireo firenena eoropeanina dia zava-dehibe [More ...]
Serivisy natolotry ny Tora-drivotra Ankara TÜBİTAK SAGE
Fanamboarana rivotra no natao hanodinana ny fifandraisan'ny zavatra misy fikorianan-drivotra. Ny telo amin'ny fandinihana aerodinamika amin'ny famolavolana dia fanaovana maodely isa, fandalinana andrana (fitsapana ny tonelina rivotra) ary fitsapana sidina. [More ...]
Tiorkia Voalohany Aircraft Carrier TCG Testing Mbola mitohy ao amin'ny Anatolia
Azontsika atao fotsiny ny mametraka helikoptera S-400B Seahawk DSH (Submarine Defense War) eny ambony sambo, satria toa tsy ho tanteraka ny fividianana mpiady F-35B ho an'ny TCG ANATOLIAN (L-70) Amphibious Assault Ship tsy ho ela. Deniz tamin'ny fiandohan'ny taona 2000 [More ...]